न्यायको कठघरामा प्रधानन्यायाधीश
‘यो मुद्दामा मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । तर, मलाई नियमावलीले बाँधेको छ’– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा । कस्तो नियम प्रधानन्यायाधीशलाई बाँध्ने ? यसको असर कि त प्रधानन्यायाधीशले स्वार्थ बाझिए पनि...
न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आज (आइतबार) न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन् । नयाँ कर्मचारीको पदस्थापन र केही कर्मचारीको सरुवाका विषयमा निर्णय गर्न कार्कीले बैठक बोलाएका हुन् । आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आइतबार अपराह्न २ बजेका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए । आइतबारको बैठकमा […]
न्याय सेवाका कर्मचारीको सरुवाबढुवा गर्ने आयोगको निर्णय
काठमाडौँ – न्याय सेवा आयोगले न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको सरुवा तथा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अध्यक्ष रहेका आयोगको बैठकले कर्मचारीको सरुवा बढुवा अत्यावश्यक भएको भन्दै निर्णय गरेको हो। कतिपय अवकास पाउन लागेका कमैचारीको बारेमा पनि निर्णय भएको स्रोतले जानकारी दियो। प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै न्यायाधीश वकिलहरुले आन्दोलन गरिरहेको अवस्था नेपाल […]
प्रधानन्यायाधीशले बोलाए न्याय सेवा आयोगको बैठक
नेपाल बार एसोसियसनको लगातारको आन्दोलनका बीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आज न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेका छन् । यसअघि ६ पुसमा बोलाइएको बैठक बस्दैनबसी स्थगित भएको थियो । तर, नेपाल बारको असहमतिका बाबजुत प्रधानन्यायाधीश राणाले आज दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन् ।प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने आयोगमा न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी सदस्
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिँदा न्याय क्षेत्र प्रभावित भयो : अध्यक्ष श्रेष्ठ
Image Khabar मंसिर २०७८
प्रधान्यायाधीशले बोलाएको न्याय सेवाको बैठक स्थगित
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बुधबार बोलाएको न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित भएको छ । न्याय परिषद सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी उपत्यका बाहिर हरको कारण बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका छन् । न्याय सेवाका राजपत्रांकित कर्मचारीको सरुवा–बढुवा लगायतको काम रोकिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबार दिउँसो ३ […]
Prashasan मंसिर २०७८
आज न्याय सेवा आयोगको बैठक
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन् । बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले बैठक आह्वान गरेका हुन् । आयोगका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार बैठक बुधबार बस्ने गरी बोलाइएको छ । लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरी जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाले बैठक बोलाएका हुन् । लोकसेवा आयोगले […] The post आज न्याय सेवा आयोगको बैठक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
राजधानी दैनिक मंसिर २०७८
काठमाडौं : न्याय परिषद्ले भोलि बुधवारका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएको छ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा अध्यक्ष रहेको न्याय सेवा आयोगमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सदस्य छन्।जबराको राजीनामा माग गर्दै बार एशोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा जबराले आयोगको बैठक बोलाएका हुन्। आयोगले यसअघि सञ्चालन गरेको जिल्ला न्यायाधीशहरूको परीक्ष
थाहा खबर मंसिर २०७८
प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाए न्याय सेवा बैठक
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले बैठक भोलिका लागि बोलाएका हुन् । उक्त बैठकको एजेण्डा जिल्ला न्यायाधीशहरूको रिजल्ट पनि निकालिएको छ। जिल्ला न्यायाधीशको १८ पदका लागि दसैंअघि आयोगले परीक्षा लिएको थियो। असोज १२ देखि १७ गतेसम्म न्यायाधीशको लागि उक्त परीक्षा भएको थियो।
सिंगो न्याय क्षेत्र नै प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ, जसबाट उनी बहिर्गमनको ठूलो दबाबमा परेका छन् सिंगो न्याय क्षेत्र नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिएर न्यायपालिकाको...
न्याय सेवाका ८६ कर्मचारीको सरुवा
न्याय सेवा आयोगको आजको बैठकले दुई सचिव, दुई सहसचिवसहित ८६ जना न्याय सेवाका कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त सरुवा गरेको हो।